धूलोको गफ - Worldnews.com
जनप्रतिनिधि आएपछि राजधानी सफा हुन्छ। मान्छेले ढुक्कसँग सासफेर्न पाउँछन् कि भन्ने आशा धरहरालाई लागेको थियो तर त्यो आशा आशामा नै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ताले धरहरालाई सताउन थालेको छ।
जनता उत्सहित भएको देखेर धरहराले पनि अबचाहिँ सुन्दर शान्त काठमाडौंको कल्पना
भ्रम र सपना
देशको राजधानी कस्तो हुनुपर्छ सबैको उत्तर आउँछ। सफा, हराभरा र सुन्दर तर नेपालको राजधानीका बारेमा कुनै विदेशीले माथिका शब्द उचारण गर्यो भने त्यो सोह्रै आना गलत हुने छ।...
धुलो हटाउन ठूला गफ मात्र किन ?
काठमाडौंबासी धुलो र धुवाँबाट दिक्क छन्। हरेक नयाँ सरकार गठन भएपछि नागरिकहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार हुन्छ। अबचाहिँ सरकारले ढुक्क भएर हिँडने वातावरण निर्माण गर्ला। व्याप्त धुँवा...
News of Nepal 2018-04-08
आशा लाग्दो कुरा
हाम्रो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि अबचाहिँ निकै चुस्त भएको जस्तो धरहरालाई पनि लागेको छ। कुरा हिजोको एसर्ईई परीक्षाको नतिजाको सन्दर्भको हो। नत्र विगतमा एसएलसीको नतिजा...
News of Nepal 2017-06-17
राजधानीका महानगरबाट मेयर निर्वाचित हुने क्रम शुरू भएको छ। ललितपुरमा कांग्रेसले जितेको छ भने काठमाडौंमा एमालेले जित्ने सम्भावना बढेको छ। यो क्रमले गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका...
News of Nepal 2017-05-25
धरहरालाई अबचाहिँ मुलुकमा केही होला कि भन्ने लागेको छ है पाठकवृन्द। किन भन्नुहोला, कुरा प्रस्टै छ– पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरूले त्यतिधेरै जोखाना हेराएको वा ज्योतिष हेराएको...
News of Nepal 2017-06-20
पूर्वराजा र धुपौरे
केही दिनयता मुलुकको राजनीति तरंगित भएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अहिले दल सिल्ली भएकाले अब देशको नेतृतव लिन आफू तयार भएको बताएपछि राजनीति एकाएक तरंगित हुन पुगेको छ।...
News of Nepal 2017-10-28
केही दिनयता मुलुकको राजनीति तरंगित भएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अहिले दल सिल्ली भएकाले अब देशको नेतृतव लिन आफू तयार भएको बताएपछि राजनीति एकाएक तरंगित हुन पुगेको छ। दुईदुई पटक राजा हुँदा पनि नपुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बोलेको वाणी सुनेर धरहरा पनि तीन छक परेको छ...
काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयर पाएपछि राजधानीबासीलाई अब त काठमाडौं सुन्दर बन्छ कि भन्ने लागेको धरहराले थाहा पाएको छ। राजधानीमा हिड्नका त कुरै छोडौं सास फेर्न सकिने अवस्था छैन। यसैले पनि यहाँका जनताले मेयर पाएपछिको सुन्दर काठमाडौंको सपना देख्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यसैले मेयरले शपथ खाएपछि केही न केही होला भन्ने ठानेको तर बाँसबारीतिरको क्षेत्रमा यसो बढारे झैं...
सुन तस्करीको विषय अहिले जाज्वल्य भएर आएको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर सुन तस्करी हुने गरेको विषय अब नयाँ र नौलो पनि भएन तर सुन समाते बापतको कमिसनका विषयमा भने प्रहरीका हाकिमबीच फेरि एकपटक बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था सृजना हुन लागेको देखेर धरहरा तीन छक परेको छ। पहुँचवाला हाकिमले अहिले...
नेताले बुझे कि ?
हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको विदेशी मिडिया र नेपाली मिडियालाई गर्ने व्यवहारमा आकाश जमिनको फरक भएको धरहराले देखेको छ। विदेशी मिडियाले सम्पर्कको प्रयास गर्यो भने उनीहरू हाफझाफ गर्दै तयार हुन्छन् तर नेपाली मिडियाले प्रयास गर्यो भने बडो भाउ खोज्ने गरेको कहिलेकाहीं देख्न पाइन्छ। अप्ठेरो पर्दा तिनै नेपाली मिडिया काम लाग्छन् भन्ने कुरा नेता र तिनका धुपौरेले बिर्सन्छन्। त्यही भएर कहिलेकाहीं...
पूर्वप्रधानमन्त्री पुकदाले हिजो बाँकेको खजुरामा गएर एउटा कडा भाषण दिनुभएछ– ‘गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनविरुद्ध टाउकाको मूल्य तोक्नेले गणतन्त्रको संरक्षण गर्न सक्दैनन्।’ उहाँको भनाइ हुबहु यही नभए पनि आशय यस्तै थियो। त्यसैले कांग्रेस र एमालेलाई होइन, माओवादी केन्द्रलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने उहाँको जिकिर रहेको धरहराबाट देखियो। उहाँले कोटइएको इतिहास त सही नै हो तर वर्तमान भने टाउकाको...